Kedu ihe bụ hydrometeor na gịnị bụ ụdị ndị bụ isi? | Netwọk Mgbasa Ozi
You nwetụla mgbe ị na-eche ihe hydrometeor bụ? Lee ị nwere azịza ya: ihe a bụ nchịkọta nke mmiri, mmiri ma ọ bụ ihe siri ike nke na-ada na mbara ikuku. Enwere ike iberibe ihe ndị a, tinye ya na ihe ndị dị na mbara igwe, ma ọ bụ daa site na mbara igwe ruo mgbe ha ruru n'elu ụwa.
N'ime ndị bụ isi anyị na-akọwapụta mmiri ozuzo, foogu, alụlụ ma ọ bụ ntu oyi. Ka anyị mara ụdị dị iche iche dị na etu esi amata ha.
Hydrometeors kwụsịrị n’elu ikuku
Ha bụ ndị nwere obere mmiri ma ọ bụ akpụrụ mmiri nke na-ekuku ikuku.
Foogu: nke nwere ntakịrị mmiri mmiri nwere ike iji anya gba ọtọ. Mmiri ndị a na-ebelata visibiliti dị n'okpuru 1km. Ajọ nwere ike adịghị ike ma ọ bụrụ na elere ya anya n’etiti dị n’agbata 500 na 1000m, agafeghị oke mgbe anya dị n’agbata 50 na 500m, ma dịkwa ike mgbe ọhụhụ erughị 50m.
Foogu: Dị ka igwe ojii, ọ bụ obere mmiri mmiri mejupụtara ya, mana na nke a, ha nwere microscopic. Na-ebelata visibiliti n'etiti 1 na 10km na iru mmiri metụtara 80%.
Hydrometeors nke a na-etinye na ihe ndị dị na mbara igwe
Ha na-eme ma ọ bụrụ na alụlụ mmiri dị na mbara igwe ekpochie ihe na ala.
Ntu oyi: na-eme mgbe a na-etinye kristal ice na ihe, na ọnọdụ okpomọkụ dị nso na ogo 0.
Ntu oyi: Mgbe ala mmiri freezes, a nnọọ amị amị oyi akwa nke ice iche, nke bụ mgbe anyị na-ekwu e nweela a ntu oyi.
Oyi kpoo: Ọ na-eme na mpaghara ebe ikuku na-adị, ikuku na-efekwa ntakịrị. Mmiri ụmụ irighiri mmiri na-ajụ oyi mgbe ha ruru ala.
Hydrometeors na-ada site na ikuku
O bu ihe anyi mara site na mmiri ozuzo. Ha bụ mmiri mmiri ma ọ bụ ihe siri ike nke sitere na igwe ojii.
Mmiri ozuzo: Ha bụ mmiri mmiri mmiri nwere dayameta karịrị 0,5 millimeters.
Nevada: Ihe mejupụtara ya bu kristal akuru mmiri si n’igwe ojii.
Ekele: Mmiri a bụ ihe akpụrụ mmiri nwere okirikiri nke dị n’agbata milimita 5 na 50.
Ọ masịwo gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ihe bụ hydrometeor na gịnị bụ ụdị ndị bụ isi?